Gaa Oslo, kedu ihe ị ga-eme ma mee n'isi obodo Norway I | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Obodo, General, Oslo
Oslo bu isi obodo Norway na kwa obodo ya kachasị nwee ụba, ịbụ ebe etiti akụ na ụba, ọdịbendị na ọchịchị. Ọ bụ obodo jupụtara ebe ị ga-eleta, yana ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie na nnukwu omenaala, yabụ ọ bụ nleta nke nwere ike iwe anyị ọtụtụ ụbọchị iji nwee ọ enjoyụ n'ihe niile ọ nwere inye.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma kedụ ebe ndị ahụ ị ga-enwerịrị na listi gị mgbe ọ bịara gaa na OsloRịba ama, n'ihi na ị nwere ole na ole ị na-ekwesịghị ịhapụ. Ma ọ bụrụ na ị hụrụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie n'anya, ị ga-anọ n'obodo nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, sitere na ọrụ nka na ụgbọ mmiri.
1 Nleta Oslo
2 Ogige Vigeland
3 Viking Museumgbọ mmiri Museum
4 Ebe nchekwa Akershus
5 Chlọ ihe nkiri Munch
Ga Oslo dị mfe, ebe ọ bụ na ụgbọ elu dị ka Ryanair, Norwegian ma ọ bụ Vueling na-eme njem adịghị ọnụ na obodo a site na isi dị ka Barcelona, ​​Madrid, Palma, Alicante ma ọ bụ Malaga. Oslo bụ obodo dị oke ọnụ, mana ndị njem nwere ike ijide kaadị a ma ama Oslo gafere, maka ọnụ ala gafere n'ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe nkiri. Ya mere, ihe anyị ga-eme ga-ekpuchi ya ma anyị ga-akwụ ụgwọ naanị njem na nri.
Ogige Vigeland abụghị naanị ogige ịga ije na ihu igwe dị mma. Enwere ike ikwu na ogige a dị ka nnukwu ọrụ nke nkà n'èzí site na onye na-ese ihe Vigeland. N'ime ogige ahụ dum ị nwere ike ịchọta ihe osise 212 na-egosi mmadụ na-anọchi anya okwu na mmetụta dị iche iche. Younwekwara ike ịchọta kọlụm nke ọnụ ọgụgụ 121 dị n'otu na ngọngọ ewepụtara site na otu okwute ahụ. N'ezie, ọ bụ ụzọ dị mma iji nọrọ n'ehihie anwụ na-acha, na-ese foto ma na-achọ ihe osise niile n'ogige ahụ, ebe ọ ga-ekwe omume inwe picnic. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmatakwu banyere onye na-ese ihe, n’otu ogige ahụ enwere ụlọ ihe ngosi nka nke a raara nye ya, iji mata ọrụ ya nke ọma, n’agbanyeghi na ihe kachasị mma bụ ikuku.
Viking Museumgbọ mmiri Museum
Na isi obodo Norway enwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme metụtara Vikings oge ochie, yabụ ugbu a na isiokwu a dị n'ụdị ekele maka usoro telivishọn, ọ bụ oge kachasị mma iji hụ ụfọdụ ụgbọ mmiri ndị ahụ gafere oke osimiri ịchọ mpaghara ọhụrụ. merie. Muselọ ihe ngosi nka nwere ụgbọ mmiri kachasị echekwa nke ụwa, nke achọtara n'ọtụtụ ili ndị eze dị n'akụkụ Oslo fjords. Ha nọrọ ebe ahụ ihe karịrị otu puku afọ dịka onyinye nke ndị eze ga-ewere na ndụ mgbe a nwụsịrị. Enwere ike ịhụ ụgbọ mmiri ndị a dị egwu n'ime ebe ngosi nka, mana ọ bụghị naanị ha ebe ahụ. Enwekwara ike ịchọta sleds na ihe ndị sitere na ndụ kwa ụbọchị nke e liri iji nye ndụ mgbe a nwụsịrị na ihe niile ịchọrọ. Na mgbakwunye, maka ndị na-achọ isiokwu nke onyinye, n'ime ụlọ ngosi ihe nka enwere ụlọ ahịa ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta mara mma. Na-emeghekarị site na Mọnde ruo Sọnde, ọ bụ ezie na ọ naghị afụ ụfụ ịlele ọnụahịa na nhazi oge tupu ị gawa.
Ebe nchekwa Akershus
Ebe a e wusiri ike dị nso na ọnụ ụlọ obodo nke obodo ahụ, yabụ anyị ga-enwe oge ịrara onwe anyị nye ebe akụkọ ihe mere eme a. Castle Akershus sitere na afọ 1300, na mgbagwoju anya bụ otu ụlọ nke ndị agha nọ na a mpaghara dị iche iche iji chebe mpaghara ahụ, n’akụkụ mmiri fjord na n’ebe dị elu bụ́ ebe a ga-anọ nwee echiche dị ebube banyere ọdịdị ala ahụ. Taa ọ ka na-eme ụfọdụ ọrụ ndị agha, mana anyị nwekwara ike ịhụ Ebe nchekwa nchekwa na Museum Museum nke dị na mgbagwoju anya. A na-eme njem nlegharị anya site na nnukwu ụlọ nke dị n'ime ogige ahụ na ọtụtụ afọ ọ bụkwa ebe ebe mausoleum nke ndị eze Norway dị. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ nleta dị mkpa n'obodo ahụ.
Chlọ ihe nkiri Munch
Ọ bụrụ n ’ọrụ Munch masịrị gị, n’ụlọ ebe ngosi nka a, ị ga - ahụ ọtụtụ n’ime eserese ya iji mụtakwuo banyere onye na-ese ihe na mmalite ya. Anyị ga-achọta ọtụtụ n'ime ọrụ ya, nke akachaghi amara dika esere ese na mba uwa nile. Agbanyeghị na etinyere ndị omenkà a na ọrụ ya nke ukwuu, anyị nwere ike ịchọta ụlọ ndị ọzọ ugbu a. Ime ụlọ maka ihe ngosi, foto, ime ụlọ dị iche iche izu ike, ọbá akwụkwọ, ụlọ nri na ebe nchekwa.
O nwere ike ịbụ na ebe ngosi ihe nka a kacha mkpa n’obodo, mana ọ nwere ike ịbụ otu obere nleta na-atọ ụtọ. E mere ụlọ ngosi ihe nka ebe a na-etinye ihe ndị anakọtara Ọnye na -bụ Hehordahl n'oge njem gị. Ọ na-enwe Kon-Tiki, nke na-enye ya aha ya, nke bụkwa ụgbọ mmiri nke sitere na ụdị mbụ nke Columbian Peruvian. E nwekwara ihe ndị onye nyocha ahụ chịkọtara na nleta ya na Island Island.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gaa Oslo, ihe ị ga-eme ma mee n'isi obodo Norway I